Download ezigbo Blackmart | Gam akporosis
Download ezigbo Blackmart ozugbo banye onwe-emelite ngwa
Paul Aparicio | | APK, Ngwa gam akporo, Nkuzi
Ọ bụghị ihe nzuzo ị na-ebudata ngwanrọ site na ihe a maara dị ka ndị ọzọ na-echekwadị ka blackmartỌ nwere ike ịdị egwu, mana anyị enweghị ike ịgọnahụ uru ya. Iji malite, ọ bụ ezie na ihe niile anabatala na Google Play, anyị nwere ike ịchọta faịlụ APK nke Google achọghị na ụlọ ahịa ngwa ya. N'aka nke ọzọ, anyị nwekwara ike ịnweta ngwa "ọgwụ" nke, na mbido, anyị agaghị akwụ euro.
Na nke a, anyị ga-ekwu maka ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Blackmart, nke a makwaara dị ka Black Market, dị ka ebe ibudata APK ya wụnye ya n'efu na ihe ọ bụla gam akporo ngwaọrụ, dị ka ogologo dị ka ị na-eji a software version na nke ngwa bụ dakọtara. Have nwere nke a na ozi ndị ọzọ n'okpuru.
1 Kedu ihe Blackmart na-enye anyị?
2 Etu ibudata Blackmart (Black Market) n'efu
3 Blackmart ngwa na Spanish
4 Etu esi wụnye Blackmart na gam akporo
5 Otu esi aga Blackmart
Kedu ihe Blackmart na-enye anyị?
Ọ bụrụ na ịnwere ngwaọrụ ọhụrụ ma ọ bụ "nkịtị" ma achọghị karịa, ị nwere ike ichefu ụlọ ahịa ndị ọzọ. Ma enwere echiche dị iche iche ebe ọ nwere ike ịdị mkpa:
Anyị zụtara a ngwaọrụ enweghị Google Play arụnyere, dị ka ekwentị dị oke ọnụ ala si china.
Anyị na-achọ a ngwa nke anabatabeghị na Google Play.
Anyị achọghị ịdabere na Google anyị na-ahọrọ ibudata ngwa site na ụlọ ahịa ọzọ.
Anyị achọghị ịdebanye aha iji Google Play.
Anyị chọrọ budata free ngwa, ihe nke, dika mgbe niile, onye ọ bụla ga-eme dị ka ụkpụrụ ha si dị. Otu ihe doro anya: ọ bụrụ na anyị akwụghị ụgwọ maka ngwa ndị masịrị anyị, onye nrụpụta nwere ike ọ gaghị enwe ike ịkwụ ụgwọ mmefu ahụ, a ga-amanye ya ịhapụ ịhapụ mmelite.
Anyị chọrọ imezu wụnye MOD enweghị ihe ọ bụla bloatware na, ozugbo arụnyere, anyị achọghị ịwụnye ukara Google ngwa ahịa, maka ihe ọ bụla kpatara.
Ọ bụrụ na nke ọ bụla dị n'elu dabara na ụzọ ị na-ele ihe, lee otu esi budata ma wụnye Blackmart.
Etu ibudata Blackmart (Black Market) n'efu
Ikwesiri ido anya banyere otu ihe: Blackmart, dika ulo oru software ndi ozo m mara, bu ngwa ngwa, kpachara anya ma ọ bụrụ na ịchọta ihe n'ịntanetị nke na-arịọ maka ego. N'ọnọdụ ọ bụla, na obere ntuziaka nwụnye a anyị ga-enye gị njikọ iji budata Blackmart APK site na weebụsaịtị ya. Anyị ga-ebudata ngwa ahụ site na ịgbaso usoro ndị a.
Anyị na-emepe ihe nchọgharị weebụ nke na-enye anyị ohere ibudata faịlụ. Dịka ọmụmaatụ, ejirila m Firefox.
Anyị na-aga na weebụsaịtị nke ụlọ ahịa site na ịme ọpịpị na njikọ a. Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ iji nsụgharị Spanish, anyị nwere ike ime ya site na ịpị aka na njikọ a ma ọ bụ na ọkọlọtọ nke Spain ma ọ bụrụ na anyị ejirila njikọ gara aga.
Anyị na-agbada ala metụ ebe ọ na - ekwu Download Blackmart ma ọ bụ ozugbo banye njikọ a.
Nbudata a ga - ebido ma ihe foduru bu iga n’iru ya.
Blackmart ngwa na Spanish
Tupu m gawa n’ihu ịkọwa otu esi wụnye Blackmart na gam akporo, ọ ga-amasị m ịkọwa nke a maka na ọ bụ ajụjụ ị jụọ anyị n’oge dị iche iche Na mkpokọta, mgbe anyị wụnye ngwa ọ bụla, sitere na Google Play ma ọ bụ ihe ọ bụla anyị hụrụ na ịntanetị, ọ A ga-etinye ya na asụsụ nke anyị ahaziri ngwaọrụ ahụ Gam akporo, ọ bụrụhaala na ha nwere nsụgharị n'asụsụ anyị. Nke a pụtara na Blackmart ga-anọ na Spanish ma ọ bụrụ na awụnyere ya na ngwaọrụ onye asụsụ ya bụ Spanish. Site na nkowa nke a, anyị gabiga n’isi okwu ọzọ.
Etu esi wụnye Blackmart na gam akporo
Abụ m ọ ga-adabere ntakịrị na ngwaọrụ nke anyị chọrọ iji wụnye ya site na interface ya, mbipute gam akporo ma ọ bụ ihe nchọgharị anyị ji budata APK. Ihu oma anyi aghaghi iso usoro ndi a:
Anyị na-enweta ngalaba nbudata ihe nchọgharị nke anyị jirila budata APK site na ụlọ ahịa ọzọ.
Anyị na-emetụ na faịlụ nhazi nke n'oge a na-ede ahịrị ndị a ma dịka ị pụrụ ịhụ na nseta ihuenyo a na-akpọ nwe_membo_apk.
N'oge a, ọ bụrụ na anyị enweghị nhọrọ iji wụnye ngwa sitere na isi mmalite ndị a na-arụ ọrụ, ọ ga-ajụ anyị ka anyị rụọ ọrụ ya. Anyị na-aga ntọala, nke dị na ngwaọrụ m bụ akpaka, anyị na-eme ka igbe ahụ rụọ ọrụ.
Anyị ga-enwe nhọrọ iji kwe ka naanị otu echichi ma ọ bụ ihe niile. Ana m ekwe ka naanị otu arụnyere, ka o wee mee.
N'oge a, anyị ga-ahụ nhọrọ ntinye ngwa. Anyị na-agụ ikikere ọ na-ajụ anyị ma ọ bụrụ na anyị enweghị ntụkwasị obi na mgbe ahụ anyị emetụ Wụnye.
Echichi ga-amalite. Anyị na-eche ka ọ gwụchaa.
N'ikpeazụ, anyị nwere ike ịchọta nhọrọ abụọ: nke mbụ na ọ ga-abụ na ọ ga-agwa anyị na enwere mmelite dị, nke m na-akwado ịwụnye ya. Ọ bụrụ na anyị wụnye ya, anyị ga-alaghachi na nzọụkwụ 3 nke nkuzi a, mana nzọụkwụ 5 agaghị apụta. Nhọrọ nke abuo bu na enweghi mmelite, yabụ anyi gha amalite iji ngwa na nbudata ngwa.
Otu esi aga Blackmart
Ọfọn, echere m na interface nke "ahịa ojii" a bụ nke kensinammuo, mana anyị ga-akọwa ya maka ndị pere mpe amaghị. Anyị ga-ahụ taabụ abụọ:
Aplicaciones. N'ebe a, anyị ga-ahụ ngwa ndị dị na ụlọ ahịa a ọzọ.
Ngwaọrụ. Si ebe a anyị ga-ahụ ngwa ọdịnala nke anyị rụnyere na ngwaọrụ gam akporo anyị.
Ihe na-amasị anyị bụ ihe Ngwa taabụ. N'ime ya anyị ga-enwekwa nhọrọ ise (ha na - apụta mgbe ị na - apịa nke kachasị ha nso), nke bụ:
Aplicaciones,, site na ebe anyị ga-ahụ ngwa ahụ.
EgwuregwuChọpụta ihe anyị ga-ahụ ebe a?
Oge na-adịbeghị anya, ebe anyị ga-ahụ ụdị ngwa niile ebugoro na ụlọ ahịa ọzọ a.
Top ngwa, ngwa kacha ebudatara.
Egwuregwu ndị kachasị elu, site na ebe anyị ga-ahụ egwuregwu kachasị ebudatara.
Oburu na ihe anyi choro bu ka emee a búsqueda, anyị nwere ike ime ya na-emetụ iko aka. Site na isi ihe atọ anyị ga-enweta nhọrọ ahụ, site na ebe anyị nwere ike ịhụ ozi nke ngwa ahụ, tinye nhazi ahụ iji gbanwee onyonyo nke ụlọ ahịa ahụ, zigara ndị mmepe ya usoro nhazi, site na ebe anyị nwere ike ịrịọ gị ịtụ anyị ngwa dị ka aha ha, nha, ọnụahịa (ahem…), downloads, mba ma ọ bụ ụbọchị. Site na ndabara "Downloads" nhọrọ na-enyocha. Anyị nwekwara ike ịhọrọ na iwu ahụ na-arịgo ma ọ bụ na-agbadata ma tinye nzacha n'etiti ha niile, akwụ ụgwọ ma ọ bụ n'efu.
You nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ụlọ ahịa ndị ọzọ Blackmart?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » APK » Download ezigbo Blackmart ozugbo banye onwe-emelite ngwa
Mgbe ị na - achọ ibudata ya, antivirus awụlikwa elu na - ekwu na ọ nwere Trojan ...
Nke ahụ bụ ụgha dị mma, ngwa ahụ dị ọcha kpamkpam na ọ bụ otu nke m rụnyere na enweghị nsogbu.
Ọ na-downloads a nnọọ iju .exe. Anaghị m atụkwasị gị obi ma otu .exe ??? mmm
Zaghachi Santiago Fernández Sapelli
Gaa na njedebe nke post ahụ bụ njikọta na igwe mirror site ebe ahụ ị ga-ebudata ya n'enweghị nsogbu.
Ernesto Rincon dijo
Ọ na-anọ na itinye ya, mgbe ị na-achọ ịchọ ngwa ọ naghị ahụ ihe ọ bụla ma na-egosi naanị ngwa ndị arụnyere na ngwaọrụ ahụ. mgbasa ozi na ala na mgbe ị na-ahapụ ụlọ ahịa ma ọ bụrụ na igosipụta ya.
Zaghachi Ernesto Rincón
Ozugbo ị wụnye ya, ị ga-egwu mmelite na mmalite nke ngwa ahụ. Download ya, wụnye ya ma dozie nsogbu.
Ọbụna imelite ngwa adịghị Ibu Ibu, ihe ọ bụla ngwọta?
Zaghachi Hector Matos
Daalụ Francisco, budata ma wụnye ngwa ahụ na enweghị nsogbu ọ bụla, na-arụ ọrụ 100%, ekele
Zaghachi to ricky
ọgbọ android dijo
Ngwọta maka blackmart, ha ga-enwerịrị ihu ọma patcher ma mepee ya, chọọ maka menu blackmart na-emeghe patch menu wee nye ya ebe ọ na-ekwu "wepụ mgbasa ozi" ma ha nye ya ebe ọ na - ekwu "patch to remove google advertisement" mgbe ahụ igbe pụtara ọtụtụ echiche ha na-ahapụ ya otu a ma ha tinye akwụkwọ nlele ebe ọ na-ekwu "tinye patcher na dalvin cache" wee wepụta nke dị n'okpuru na-ekwu "ndabere apk to reinstall" na voila ha nyere ya ka o tinye ma blackmart na-arụ ọrụ zuru oke ma na-achọ nke ọ bụla ngwa. Ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe windo na-ese n'elu mmiri na android kitkat ana m akwado vidiyo a:
lee ya anya igaghi akwa ụta.
Zaghachi nye ọgbọ android
Ngwa nke na-adighi BLackmart na-akpọrọ m ibudata faịlụ LINKUP ... mba mba mba.
Enweghị m ike imeghe ya ozugbo m budịrị ya, ọ na-agwa m ọkwa na anaghị ebudata nchịkọta ndị m na-eme? Otu onye nyere m aka .. !!!
Njikọ ndị ahụ bụ saggy karịa nnụnnụ nne nne m
Zaghachi na Enwe
Ọ naghị anabata mmelite ihe ọ bụla.
Naanị m chọrọ ịwụnye ngwa a
Enyi, ibudatara ya mana ọ na-enye m njehie mgbe m na-enyocha ngwugwu ahụ, agbalịrịla m ịwụnye ya na google drive ọ na-ekwukwa otu ihe ahụ, gịnị ka m ga-eme?
Zaghachi ka edwinwwww
TAG Heuer ga-ebido smartwatch ọhụrụ na Mee nke afọ a
Google nwetara Fabric, Twitter si mobile ngwa mmepe n'elu ikpo okwu